Jowhar.com : Somali Leader News - News: Mareykanka oo malaayiin doolar dul dhigay madaxa saddex ka tirsan Saraakiisha sar sare Al-Shabaab
April 24 2014 20:49:25
Mareykanka oo malaayiin doolar dul dhigay madaxa saddex ka tirsan Saraakiisha sar sare Al-Shabaab
Wasaarada Arrimaha Dibada Mareykanka ayaa min saddex milyan oo doolarka Mareynaka dul dhigtay saddex sarkaal oo ka tirsan Al-Shabaab, cidii keenta macluumaad horseeda in la soo qabto.
Warka ka soo baxay wasaarada ayaa lagu sheegay in C/qaadir Maxamed C/qaadir oo loo yaqaao Cikrama madaxiisa la dul dhigay saddex milyan doolar, cidii keenta macluumaad ku saabsan halka uu ku sugan yahay.
Cikrama ayaa ka bad baaday weerar ay kumadoska Mareykanka qaadeen horaantii bishii October ee sanadkii hore, markii lagu weeraray guri uu ka degenaa degmada Baraawe, waxaana ninkan lagu eedeeyay inuu mas'uul ka ahaa weerarada ka dhaca Kenya iyo qorista dhalinyarada Kenyanka ee u dagaalanata Al-Shabaab.
Ninkan ayaa ku dhashay gudaha dalka Kenya sanadkii 1979, waxaana horay ugu noolaa dalka Norway, iyo Ingiriiska oo uu ka dalbaday magangalyo, hase ahaatee ku guuldareystay.
Qofka labaad ayaa lagu magacaabaa Jacfar oo loo yaqaano Camaar, waxaa isna la sheegay inuu kuxigeen u yahay Cikrama, ninkan ayaa ka go'an qaar ka mid ah faraha, sida lagu sheegay warbixinta Wasaarada Arrimaha dibada Mareykanka.
Sidoo kale qofka saddexaad ayaa lagu magacaabaa Yaasiin Kilwe, kaasoo ah Amiirka Al-Shabaab u qaabilsan Puntland, waxaana magacaabay Hogaamiyaha sare ee Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane.
Warbixinta Wasaarada Arrimaha dibada Mareykanka ayaa sheegay in nimankan ay yihiin kuwo qatar badan, isla markaana hadii la helo macluumaad lagu soo qaban karo ay suura gelin karto in Maxkamad la horkeeno.
Mareykanka ayaa horay lacag gaareysa 33-milyan doolarka Mareykanka u dul dhigay ilaa 7-hogaamiye oo ka tirsan Al-Shabaab, oo uu ku jiro Amiirka ugu sareeya Axmed Godane oo keligiis madaxiis la saaray 7-milyan doolarka Mareykanka.
0 Comments · 4519 Reads
Jowhar.com750,435 unique visits